Bogga Ciyaaraha, 11 November 2015
Arbaco 11 November 2015
Tartanka Ciyaaraha Premier League oo Bilawday
Dalka Britian waxaa ka furmay shalay tartankii Cayaaraha ee Premier League kaas oo ka mid ah tartamada ugu caansan dunida, waxana cayaaray qaar ka mida kooxaha ugu waaweyn.
Kooxda Ohio oo Qaadday Koobkii Toddobaadka Soomaalida
Dalka Canada waxaa xalay lagu soo gebagebeeyey Tartanka Kubadda Cagta oo qayb ka ahaa kulanka Soomaalida ee ka dhacayey dalka Canada. Tartankan kubadda Cagta ee xalay la soo gebagebeeyey ayaa sannad kasta la qabanayey 25-kii sano ee ugu dambeeyey.
Tartanka Ciyaaraha Soomaalida oo Sweden ka Furmay
Dalka Sweden waxaa maanta ka furmay tartan ay sannadkiiba mar isugu yimaaddaan kooxaha kubadda cagta ee Soomaalida ku nool dalalka Qurbaha, Tartanka sannadkan ayaa noqonaya kii tobnaad,
Diyaarad Military oo ku Burburtay Indonesia
Dalka Indoneisa in kabadan 50 qof ayaa dhintay markii diyaarad military ay ku dhacday xaafad ay dadku dagan yihiin oo ku taalla magaalada Medan ee jaziiradda Sumatra.
Tartanka Ciyaaraha ee Copa America
Tartanka Cayaaraha ee Koonfurta iyo Badhtamaha Qaaradda Amerika ayaa ka furmay dalka Chile, Tartankan oo lagu magcaabo Copa America waxaa warbixin arrintaas la xidhiidha innooga diyaariyey Maxamuud Mascadde.
Koobkii Qaramada Africa ee kubadda cagta ayaa waxaa ku guulaystay xulka qaranka ee Ivory Coast oo ka badisay Ghana.
Mascadde iyo Ciyaaraha Toddobaadka
Barnaamijka Ciyaaraha ee toddobaadkan waxaa soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinaya weriyahayaga Maxamuud Mascadde.
Dhacdooyinkii Ciyaaraha ee 2014
Waa barnaamij gaar ah oo aannu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ciyaarta kubadda cagta oo meelo kala duwan oo dunida ah ka dhacay, iyada oo ciyaartii Koobka Adduunka aan si gaar ah u eegayno.
Barnaamijka Falanqaynta Cayaaraha
Maanta waxaa si weyn loo sugayaa ciyaarta ka dhici doonta garoonka Emirates Stadium ee magaalada London waxaana iskaga hor imanaya kooxaha Manchester United iyo weliba Arsenal
Waxyaabihii u Gaarka ahaa Koobka Adduunka 2014
Barnaamijka Ciyaaraha ee maantana waxan idiinku haynaa waxyaabihii u gaarka ahaa iyo kuwii la yaabka lahaa ee ka dhacay Koobka Adduunka oo sanadkan ka dhacay dalka Brazil.
Jarmalka oo Qaaday Koobka Adduunka 2014
Xulka Jarmalka ayaa ku guuleystay koobka adduunka 2014, kaddib markii ciyaarkii kama dambeyska uu 1-0 kaga badiyay Argentine. Waa Markii 4aad ee Jarmalku uu ku guuleysto koobka Adduunka.
Gabagabadii Koobka Adduunka
Maanta ayaa loo ballansanyahay cayaartii gabagabada ee Koobka Adduunka ee Kubadda Cagta, VOA ayaa faaqidaad ammuurtaasi ku saabsan barnaamij ka diyaarisay.